Ahoana ny fampidinana kinova taloha amin'ny fonosana Cydia | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo fiasa vaovao manan-danja indrindra amin'ny kinova 1.1.23 an'ny Cydia ny mety hisintona fonosana teo aloha. Azo inoana fa rehefa napetraka ny fonosana dia ho hitantsika fa gaga isika fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ary ny safidy tokana nananantsika hatramin'izao dia ny famonoana na ny fanesorana ilay tweak. Amin'ity safidy vaovao ity dia tsy mila mampidina ny fonosana farany izay niasa ho antsika amin'ireo mbola misy ihany isika, zavatra izay marin-toetra tiako ho hita ao amin'ny App Store ihany koa.
Tsotra tokoa ny fizotrany ary azo antoka fa ireo mpampiasa manana traikefa bebe kokoa dia efa nahita io safidy io, saingy azo antoka fa misy ireo mpampiasa vaovao izay tsy mahalala ny fomba hidirana amin'ity asa vaovao ity, izay, rahateo, eo akaikin'ny safidy hafa efa nisy. nandritra ny fotoana ela. teo aloha. Manaraka izany dia hasiako tsipiriany ilay (tsotra) dingana arahinao raha te haka ny fonosana Cydia taloha.
Izahay dia mitady ilay fonosana te-hidina ambany izahay
Raha vantany vao eo amin'ny efijery famaritana dia manindry ny bokotra isika fiovana.
Nilalao izahay manambany.
Misafidy ny kinova tadiavina izahay.
Ambony ankavanana nikitihinay manamafy.
Ny mahatsara ny ity safidy vaovao ity dia misy amin'ny fonosana rehetra, tsy ireo an'ny mpandraharaha lehibe ihany.
Raha toa ka mora ampiasaina ao amin'ny App Store izany, ilay fivarotana izay eken'ny Apple ny fampiharana satria heveriny ho azo antoka sy milamina izy ireo, alao sary an-tsaina ny maha-zava-dehibe azy io ao Cydia, izay mety hitantsika fa fanovana ny rafitra lalina izay mety tsy mandeha amin'ny voalohany. . Faly be aho fa nisy io safidy io, ohatra, rehefa tao amin'ny kinova voalohany ho an'ny iOS i Auxo 6. Isan'andro dia nanana fanidiana fampiharana an-taonina aho, ka nifarana ny fanapahana ilay tweak. Tamin'ny farany dia tsy maintsy nampidirako ny trano firaketana A3Tweaks hametrahana ireo kinova izay manandrana manitsy ny olana. Nefa hoy ny fitenenana, tsy tara loatra raha tsara ny fahasambarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba fampidinana kinova taloha amin'ny fonosana Cydia
Tsy misy zavatra miseho amiko, misy mahalala ve ny antony?
tsy mivoaka: /
mpitandro filaminana dia hoy izy:
Izaho sy i Ami no manana ny kinova farany an'ny cydia.
Valiny tamin'i Cherif